Russia 2018. Ity no smartwatch an'ny mpitsara tantanin'ny Wear OS | Androidsis
Ny amboara eran-tany baolina kitra izay tazonina any Russia amin'ity taona ity dia efa natomboka na izany aza tsy mahafa-po ho an'ny ekipa miteny espaniola rehetra. Ity fiadiana ny amboara eran-tany ity no voalohany amin'ny fomba ofisialy izay hampiasan'ny mpitsara ny smarwatch tsy hifehezana ny ora sy ny minitra mila ampiana fotsiny, fa koa ny hifandraisana amin'ny VAR.
Ny VAR dia mpitsara mpanampy horonantsary izay mamela miaraka amin'ny teknolojia Goal-Line fantaro amin'ny fotoana rehetra ary tsy latsaky ny segondra dia nandalo ny tsipika ny baolina ka ny tanjona dia afaka miakatra amin'ny scoreboard. Raha manamafy izy, izany hoe raha mandalo ny tsipika ny baolina dia mahazo fampandrenesana ny mpitsara amin'ny findainy miaraka amin'ny teny hoe GOAL.
Hublot dia tsy nanao afa-tsy maodely 2018 izay mitentina $ 5.200 tsirairay avy, noho izany tsy azon'ny mpampiasa maro izy io. Notantanan'ny Wear OS izy ary nantsoina hoe Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup Russia.
Ity no tompon-daka eran-tany voalohany ny smartwatch dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fanapahan-kevitry ny mpitsara amin'ny fomba ofisialy, saingy tsy vao voalohany no nampiasana azy, satria nandritra ny fiadiana ny amboaran'ny kaonfederasiona sy ny fiadiana ny amboara eran-tany Club, dia efa nisedra ity fitaovana ity ny orinasa soisa.
Ity modely ity Azo ampiarahina amin'ny sainan'ireo firenena mandray anjara amin'ny fiadiana ny tompon-daka eran-tany, mampitandrina antsika 15 minitra alohan'ny lalao tsirairay, mampiseho ny filaharan'ny ekipa tsirairay, miaraka amin'ny tanjona, karatra ary angona hafa mifandraika amin'ny lalao resahina.
Fa koa, koa manolotra fidirana amin'ny rindranasa rehetra izay Google manome ho an'ny mpampiasa miaraka amin'ny rafitra fiasa ho an'ny smartwatches Wear OS. Na dia tsy be loatra aza ny fanaovana dokambarotra, amin'io lafiny io, ny fampiasana ny smartwatch tantanin'ny Wear OS ny mpitsara fa tsy ny fampiasana Apple Watch na Tizen dia zavatra tena tsara ho an'i Google sy ny drafitra ho avy ho an'ny sehatra entina entina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Russia 2018. Ity no smartwatch an'ny mpitsara tantanin'ny Wear OS
Ny OUKITEL K7 azo alaina mialoha ny vidiny $ 159,99
Nanivana ny vidiny sy ny daty famotsorana ny Xiaomi Mi A2